Lozam-piarakodia tetsy Ambatonapoaka - Nindaosin'ny fahafatesana tampoka izy mivady - L'Hebdo de Madagascar
Fahabangana lehibe teo anivon’ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa ary ny mpiara-monina ny fahafatesan-dRakotonirainy Faliarimanana Niry sy Andrianaivosoa Hajanirina Domohina, mivady, tamin’ny Sabotsy 27 jolay 2019 noho ny lozam-pifamoivoizana nanjo azy ireo, teny amin’ny lalam-pirenena voalohany.
Ny fahavakisan’ny kodiarana no antony nahatonga ny loza raha ny tatitry avy amin’ny mpi- tandro ny filaminana. Mitantara ny fiarahana sy ny fiainan’izy ireo, fony fahazaza, Rahaingo Lolona Hasina, anabaviny.
Handeha hamonjy fandevenana, any Soavinandriana Itasy, Rakotonirainy Faliarimanana Niry sy Andrianaivosoa Hajanirina Domohina, mivady no tradoza, teny Ambatonapoaka, distrikan’Arivonimamo, làlam-pirenena voalohany, ny sabotsy 27 jolay, tokony tamin’ny 8 ora sy sasany maraina. Akaikin’ny tsenan’omby eo Ambatonapoaka. Vokatry ny fahavakisan’ny kodiarana aloha ankavanan’ny fiara tsy mataho-dàlana « Hyundai Sorento » no niteraka ny loza raha ny tatitry ny mpitandro filaminana.
Dimy mianadahy no tao anatin’ny fiara ka roa ny vehivavy. Izy mivady niampy lehilahy iray no nindaosin’ny fahafatesana tamin’ity loza mahatsiravina ity. Naratra kosa ireo roa ambiny. Andrianaivosoa Hajanirina Domohina no nitondra ny fiarakodia, raha ny tatitry ny mpitandro filaminana hatrany. Tsy voafehiny intsony ny familiana ka tany an-tanimbary vao nijanona ny fiara rehefa avy nivadibadika. Maty tsy tra-drano izy mivady. Tonga teny amin’ny hopitalin’Arivonimamo vao tsy tana ny ain’ilay lehilahy, niara-dia tamin’izy mivady.
Miasa amin’ny orinasa lehibe iray ao Toamasina, Rakotonirainy Faliarima- nana Niry ary mpampianatra amin’ny Lisea, Andrianaivosoa Hajanirina Domohina, vadiny. Niteraka telo mirahalahy izy mivady. Nandeha taxibrousse, ny alin’ny alakamisy 25 jolay fa tsy nitondra ny fiara aza ireo manokana, izy mivady noho ny fisian’ny fahoriana, teo anivon’ny fianakaviana, taty andrenivohitra.
Nisy mpiara-mivavaka sady namana akaikin’izy mivady no halevina any Soavinandriana Itasy, tamin’io sabotsy 27 jolay nitrangan’ny atambo io. Nindrana fiara tamin’ny mpiara-mivavaka izy mivady ho entiny handevina. « Efa mahazatra anay ny mahita sy mandre azy mivady miara-dia mamonjy fandevenana na mpiara-mivavaka na namany akaiky. Akona fotsiny aho raha nandre fa tratran’ny lozam-piarakodia izy mivady ny tolakandro », hoy Rahaingo Lolona Hasina, anabaviny.
Mpiara-mivavaka amin-dRakotonirainy Faliarimanana Niry, mivady no tao anatin’ny fiara tsy mataho-dàlana « Hyundai Sorento ». Andrianaivosoa Hajanirina Domohina no nitana ny familiana izay efa manana traikefa raha ny fanamarihana nataon’ny zanany lahimatoa. Tsy nisy afaka nidina tany Ambato- napoaka na ny fianaka- viana sy ny namana akai- kin’izy mivady, fa zary lasa honohono ny antony nahatonga ny loza.
Ny mpiara-monina sy ny fiara sendra nandalo no nanao ny vonjy voina voalhany mandrapahatonga ny mpitandro ny filaminana. « Tsy hita teny an-tànan’i Faly intsony ny peratra mariaziny ary ny findainy avo lenta. Mbola teny an-tànan’i Domohina kosa ny peratra rehefa tonga teny amin’ny hopitaly Miaramila eny Soa- vinandriana, izay toeram-piasako. Samy tsy nisy nahita ny toerana nisehoan’ny loza sy ny tena zava-nisy tany na ny havana na ny mpiara-mivavaka taminy fa samy niandry teny amin’ny hopitaly fotsiny » hoy Rahaingo Lolona Hasina, mitanondrika tamin’ny fahoriana telo sosona teo anivon’ny fianakaviana. Vao avy nandevina olona akaiky mantsy ny fianakaviana ny zoma 26 jolay dia nandevina indray ny alatsinainy 29 jolay.
Mazoto amin’ny asa fanompoana an’Andriamani- tra, izy mivady, fony fahavelony. Hita soritra amin’ny fiainana andavanandrony, izany asa fanompoana izany. Tia mitsikitsiky sy be fandeferana ary tsy hita misoritra eny amin’ny tarehin- dRakotonirainy Faliarimanana Niry, ny fahatezerana, na ny fahakeliny na hatra- min’izao izy nandao ny tany izao, raha ny filazan’ny ana-baviny. « Olona tia fivavahana izy mivady. Raha misy fotoana na kely fotsiny aza dia iny izy mivady hitanao mamonjy fivoriam-bavaka. Tena tsy mirohy fo mihitsy manatanteraka izany asa Masina izany. Ataony zava- poana izany hoe vola na harena izany fa tena nape- trany tamin’Andriamanitra ny fiainany iray manontolo », hoy ny mpitandrina avy amin’ny fiangonana zandriny, tonga nanatrika ny fandevenana sady fianakaviana akaikin’izy mivady.
Niara-nipetraka tamin’ny ray amandreniny teny Anjanahary ry Rakotonirainy Faliarimanana Niry sy Rahaingo Lolona Hasina, ana- baviny, fony fahazaza sy fahatanorana. « Tena tanterany hatramin’ny fialany tety an-tany ny fiainam-bavaka izany. Na ny zanany aza hita mihitsy fa tsy nahakivy azy ireo ny nahafatesan’ny ray aman-dreniny fa vao mainka matotra na fomba firesaka na fihetsika izy roa lahy zokiny fa ilay zandriny efa-taona no so- mary mbola adaladala kely », hoy Rahaingo Lolona Hasina, sady namihana ireo raki-tsary misy ny sarin’ny anadahiny.